Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Umntu omnye kwabahlanu waseBritane waligatya icebiso ngokuchasene nohambo lwangaphandle
Baninzi abantu abasuka eLondon abakhe baphumla phesheya kwezi nyanga zili-12 zidlulileyo kunawo nawuphi na omnye ummandla wase-UK, nge-41% besithi bathathe iholide yaphesheya kweentsuku ezisixhenxe okanye ngaphezulu kwaye ngama-36% kuphela abathi khange babenayo iholide.
Umntu omnye kwabahlanu uphose ecaleni amaxhala malunga ne-Covid- kwaye wadelela izilumkiso eziphindaphindiweyo ezivela kwabezopolitiko kunye neengcali ukuba bahlale ekhaya-ukuze bathathe iholide yaphesheya kulo nyaka uphelileyo, ityhila uphando olukhutshwe namhlanje (ngoMvulo woku-1 kuNovemba) yi-WTM yaseLondon.
Iziphumo ezivela kwiNgxelo yoShishino lwe-WTM, ephonononge i-1,000 yabathengi base-UK, ityhila i-21% ye-Brits ithathe iholide yeentsuku ezisixhenxe okanye ngaphezulu kwiinyanga ezili-12 ukuya ku-Agasti ka-2021, kunye ne-4% yabo bobabini banohambo lwaphesheya kunye nokuhlala.
Enye i-29% ithathe indawo yokuhlala kuphela, ngelixa i-51% ingazange iye eholideyini kwaphela kulo nyaka uphelileyo, idiza ingxelo ekhutshwe e-WTM yaseLondon.
Abo baye baphuma phesheya ngekhefu leentsuku ezisixhenxe okanye ixesha elide bekwenzile oko ngaphandle kwezibongozo eziphindaphindiweyo ezivela kubaphathiswa bakaRhulumente kunye nabacebisi bezempilo ukuba bangahambi, phakathi koloyiko lokuba iCovid inokusasazeka ngakumbi.
Ngamaxesha ahlukeneyo kwiinyanga ezili-18 ezidlulileyo, ukuhamba ngaphakathi nokubuya e-UK kuye kwanqunyanyiswa ngenxa ye-Covid, kubandakanya ixesha elininzi kwiinyanga ezintathu zokuqala zika-2021, xa uhambo lwaphesheya lwalungekho mthethweni.
Naxa kuhanjwa phesheya kolwandle bekunjalo kuvunyelwe, abaphathiswa bakarhulumente kunye neengcali zonyango babongoza abantu ukuba bayeke iiholide zabo zonyaka zaphesheya ukuze bancede baphathe i-Covid.
NgoJuni ka-2020, owayesakuba nguMphathiswa wezeMpilo uHelen Whately uxelele iBrits ukuba kufuneka "bajonge ngenyameko" ngaphambi kokuba babhukishe iiholide zangaphandle; NgoJanuwari 2021, owayesakuba nguNobhala Wezempilo uMat Hancock wacebisa abantu ukuba bacwangcise “ihlobo elikhulu laseBritane” kwaye uNobhala Wezangaphandle uDominic Raab wathi “kwakungekudala kakhulu” ukuba iBrits ibhukishe ikhefu lasehlotyeni phesheya kolwandle. Owayesakuba ngunobhala wezokusiNgqongileyo uGeorge Eustice waphinda waqinisekisa ukuba "akananjongo yokuhamba okanye ukuya kwiholide phesheya", ngelixa iNkulumbuso u-Boris Johnson wathi ngoMeyi ukuba abakhenkethi baseBritane bangayi kumazwe anoluhlu lwe-amber ngaphandle kweemeko "ezigqithisileyo".
Ingxaki kunye neendleko zovavanyo lwe-Covid, kunye nokubhideka kwenkqubo yokukhanya kwetrafikhi - hayi kancinci umngcipheko wotshintsho lomzuzu wokugqibela obone abakhenkethi bebuyela ekhaya e-UK benqanda ukuvalelwa - ngokucacileyo akubabekanga abo bafuna iholide yaphesheya. .
Abo kusenokwenzeka ukuba baye bathatha iholide yaphesheya basuka kuMntla Mpuma, abantu abangama-63% kulo mmandla bathi khange babe nazo iiholide kwaphela, i-13% ithi bathathe iholide yaphesheya kwaye i-25% ithi ndathatha indawo yokuhlala.
UMlawuli weMiboniso we-WTM eLondon uSimon Press uthe: “Iziphumo ziyazithethela-iholide yesiqhelo yasehlotyeni ibonwa ngabantu abaninzi baseBritane njengemfuneko, hayi into yolonwabo, kwaye bambalwa ababekulungele ukuncama iintsuku zabo ezisixhenxe okanye ezili-14 elangeni. kwiinyanga ezili-12 ezidlulileyo ngenxa yeenkxalabo malunga ne-Covid.
"Ngaphandle kokuba kufuneke uthathe uvavanyo lwe-Covid olubiza kakhulu, umngcipheko wokutshintsha ukukhanya kwetrafikhi kwaye uchasene neengcebiso ezininzi ezivela kwiinkokeli ukuba zihlale ekhaya."